စိတျခလြကျခြ ခဈြကွမယျဆိုရငျ - OnDoctor
By Win Win May	 On Jun 13, 2018 Last updated Jul 3, 2018
ဒေါက်တာနှင်း အပြင်ဆေးခန်းစထိုင်တော့ လာကြတဲ့ လူနာတွေရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ဟာ depot ခေါ် ၃ လခံ သန္ဓေတားဆေး လာထိုးကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရယ်ပါ။ အရွယ်စုံ ပါပဲ… အိမ်ထောင်ကျတာ မကြာသေးလို့.. ကလေး မယူချင်သေးလို့… ကလေးတွေက များနေပြီမို့လို့… စီးပွားရေးအရ ကလေး ယူဖို့ မပြေလည်လို့… စတဲ့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံနဲ့ပေါ့လေ။ ကြပ်သည်ထက်ကြပ်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးထက် သားဆက်ခြားကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးဦးစားပေးလာကြတာကို တွေ့နေရသည်လေ။ ဆေးကဒ်သောက်တယ် ဆိုတာ သူတို့ အနိမ့်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျ အသက်သာဆုံး သားဆက်ခြား နည်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ သောက်ရမှာမေ့တာနဲ့ မှတ်ရတာနဲ့ ဆိုတော့ ၃ လခံဆေးဘက် လှည့်လာကြသည်။
ရာသီပေါ်ပြီး ၇ ရက်အတွင်းထိုးရင် ၃ လ ကတော့ အေးဆေးနေတော့ပဲ …. ရာသီမပေါ်ခင်ထိုးရင်တော့ ၇ ရက် တူတူနေတာရှောင်..မရှောင်နိုင်ရင် အမျိုးသားကို ကွန်ဒုံးသုံးခိုင်း ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ်က အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ပေါ့။ စိတ်ချရလားဆိုတော့ ဆေးရဲ့ အရည်အသွေး၊ သိုလှောင်မှုစနစ၊် ထိုးတဲ့ ရက် ၊ ထိုးပုံထိုးနည်း ၊ ကိုယ်နဲ့ သင့်မသင့် စတာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးထိုးတဲ့လူတစ်ထောင်မှာ ၃-၅ယောက်လောက်ထိ ဆေးမအောင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်တော့ အတော်နည်းတဲ့ အနေအထားပါ။သို့သော် ထိုအနည်းအကျဉ်းထဲ ကံဆိုးစွာဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့အခါ..” ဆရာမရယ် လွန်ခဲ့တဲ့လကမှ ဆေးထိုးထားတာ ဥစ္စာ … ဘယ်လို ကိုယ်ဝန်ရသွားတယ် မသိဘူး” ဆိုပီးမေးကြပါလေရော… ။
” ရော်…. တော်တို့ကို ရှင်းပြထားတယ်လေကွယ်…ဘယ်ဆေး ဘယ်နည်းလမ်းမှ ၁၀၀% ကိုယ်ဝန်တားပေးနိုင်တယ် အာမ မခံဘူးဆိုတာ” လို့ပြောတော့မှ မျက်နှာလေး မဲ့တဲ့တဲ့ နှင့် ကလေး မလို ချင်ပဲ ယူလိုက်ကြရတာမျိုး ရှိသေးသည်။ သည်ကြားထဲ ထိုးဆေး သောက်ဆေးတွေဆိုတာက အနည်းနဲ့ အများဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနှင့်… ဆေးသောက်ဆေးထိုးပြီး မူးလို့မော်လို့..တလှပ်လှပ်တုန်လို့…သွေးပေါင်တက်လို့..ဝ တက်လာလို့.. စတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပေါင်းစုံကြောင့် ဆေးရပ် လိုက်ရတဲ့သူတွေလည်း ရာခိုင်နှုန်းမနည်း။ ကဲ… ဘာလုပ်မလဲ?? လက်မောင်းထဲ ပိုက်ထည့် ဆိုတော့ ပိုက်ဖိုးက သူတို့ လခသုံးပုံတစ်ပုံစာလောက်ရှိသည်… မတတ်နိုင်ဘူးဆရာမရယ် တဲ့။ သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်ရင် သိပ်မကုန်ဘူး … ထည့်ချင်လားဆိုတော့လည်း တစ်ဝက်လောက်က ယောက်ျားသာယူထားတာ မကြားကောင်းတာကြားလိုက်ရသလိုကြောက်လိုက်သည်မှာနေစရာမရှိ။
မနာပါဘူး လို့ ဘယ်လိုပင်စည်းရုံးသော်လည်း လက်မခံ… ကိုယ်ကလည်း သိပ်မစည်းရုံးရဲ… သည်နည်းက သွေးဆင်းများတာ မမှန်တာ ဆီးစပ်အောင့်တာတွေ ဖြစ်တတ်သေးသည်။ ကဲ… ဒါဖြင့်ကွန်ဒုံးသုံးကြဆိုတော့ မျက်နှာတော်တွေက မကြည်။ ကြားလေသွေးတောင် ဝေးတယ်ထင်တဲ့ ညားကာစလင်မယားကို ဒီဆရာမက ဘာတွေ လုပ်ခိုင်းမှန်း မသိဘူး ဆိုတဲ့ မထုံတတ်တေးမျက်နှာပေးလေးတွေနှင့်။ တကယ်တော့ ကွန်ဒုံးက လွဲလို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ သားဆက်ခြားနည်းတွေ အကုန်လုံးဟာ သဘာဝကို ဆန့်ကျင် တာမြစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အလျောက် ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိူးတွေရှိသည်။ တားဆေး ကြာကြာ သောက်/ထိုး လျှင် ဆေးဖြတ်လိုက်သော်လည်း ရာသီ စက်ဝန်း ကမောက်ကမ ဖြစ်တာ.. ရာသီထိန်တာ… ကလေးလိုချင်ကာမှ မရတော့တာ… ဒါတွေက အတွေ့ရအများဆုံး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေပေါ့လေ။
ကျွန်မဆေးခန်းထိုင်လာတဲ့သက်တမ်းတလျှောက် ကလေးလိုချင်လို့ လာတိုင်ပင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေကို မေးကြည့်တဲ့အခါ အဲ့ထဲက၁၀ယောက်မှာ ၉ယောက်က အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ တားဆေးတွေထဲက တနည်းမဟုတ်တနည်းကို နှစ်နဲ့ချီ သုံးစွဲထားတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာလို စစ်တမ်းကောက်သုတေသနအချက်အလက်တွေအားနညိးလို့သာ အပေါ်က သဘာဝဆန့်ကျင်တဲ့နည်းတေနဲ့ကိုယ်ဝန်တားခြင်းတွေကို ရေရှည်သုံးစွဲရင် တကယ်ကလေးလိုချင်တဲ့အခါ ကလေးမရနိုင်တော့တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ရှိလည်း အတိအကျ မပြောနိုင်တာ။နှစ်ရှည်လများ ရေရှည်သုံးစွဲရင် ကလေးမရနိုင်ချေအရမ်းမြင့်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မအတွေ့အကြုံအရ သတိထားမိတာမို့ ဒါကို လေးလေးနက်နက် သတိချပ်စေလိုပါတယ်။
ဆိုတော့… ဆိုးကျိုးမရှိပဲ ၁၀၀% ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်း မရှိတော့ဘူး လား ဆရာမရယ် လို့ မေးရင် ရှိပါသည်။ သဘာဝတရားရဲ့ လက်ဆောင်ကို ဒေါက်တာနှင်းတို့ သတိ မထားမိ ကြလို့သာပါ…တကယ်တမ်းသေချာလိုက်လုပ်ရင် တေည်တော် ထိရောက်ပါသည်။ လိုတာကတော့ ပြက္ခဒိန် တစ်ခုနဲ့ ဂဏန်းသချာင်္အပေါင်းအနှုတ် တတ်ရင် ဖြစ်ပြီဆိုပါတော့။ အလွယ် “ရက်ရှောင်နည်း” လို့ပဲခေါ်လိုက်ရအောင်ပါ။ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
အမျိုး သမီးတစ်ဦးရဲ့ရာသီစက်ဝန်းမှာ အဆင့် ၂ ခုရှိတယ်။ သားဥမကြွေမီအဆင့်(Follicular phase)နဲသားဥကြွေပြီးအဆင့်(Luteal phase)့ပေါ့။ အဲဒီမှာ ရှေ့ကအဆင့် သားဥ မကြွေမီအဆင့်(Follicular phase)ရဲ့ ကြာချိန်က ပုံသေ (၁၄) ရက်ပဲ။ နောက်က သားဥကြွေပြီးအဆင့်( luteal phase)ကသာ အချိန်ကာလ ရှည်တာ တိုတာ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည်။ သည်တော့နောက်က သားဥကြွေပြီးအဆင့်ရဲ့ ကြာချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ၂၈ ကြာတို့…၃၀ ကြာ..၃၂ ရက်ကြ ဓမ္မတာစက်ဝန်း ကာလ တွေ ကွဲသွားတာအားလုံးက ဒီသားဥကြွေပြီးအဆင့်ရဲ့ ကြာချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့်ပါပဲ။ ဒါဟာ သဘာဝကပေးတဲ့ ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်ရဲ့ တိကျမှုပါပဲ။ ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ် အမြတ်ထုတ်ပြီး ပြက္ခဒိန်နည်း (ဝါ) ရက်ရှောင်နည်းရယ်လို့ ဖြစ်လာတာပါ။
ကဲ အခု… အဓိက ပြောချင်တဲ့ အပိုင်းကိုရောက်ပြီ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဓမ္မတာလာလို့ နောက်ဆုံးရက် ပြီး နောက်တစ်ရက် ကို Day 1 (ပထမရက် ) လို့ သတ်မှတ်ပါမည်။ အဲဒီ ပထမရက်ကနေ အဌမရက်မြောက်နေ့ ( day 1 to day 7)အထိသည် ချစ်ခြင်းကာလ ( safe period) ပါ… ဆိုလိုတာက စိတ်ချလက်ချ တူတူနေလို့ရပါသည်။ ကလေး မရနိုင်ပါ။8ရက်မြောက်နေ့ကနေ 18ရက်မြောက်နေ့ ( day8 to day18)သည် ချစ်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကာလပါ။ ကလေး ရနိုင်ချေ ရှိတဲ့ ကာလပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သန္ဓေတည်ဖို့ဆိုရင် မမျိုးဥ(သားဥ) နဲ့ သုတ်ကောင် ပေါင်းရပါမည်။ သည်လိုပေါင်းဖို့ရာ သားဥကြွေတဲ့ အချိန်နဲ့ သုတ်ကောင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ အချိန်တိုက်ဆိုင်ဖို့ လိုပါသေးသည်။ သာဥဘယ်ချိန်ကြွေသလဲဆိုရင် ပထမအဆင့်ရဲ့ အဆုံးခါနီးမှာကြွေပါသည်။ ဒါဆို ရာသီရက်နှင့်တွက်လျှင် Day 13(or Day 14) မြောက်နေ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါသည်။ သားဥသက်တမ်းက 3ရက်။ ဆိုတော့ သည်ရက် အတွင်း သုတ်ကောင်ရောက်လာရမည်။ သုတ်ကောင်၏ သက်တမ်းက အများဆုံး ၅ရက် ဆိုတော့ ဒီသားဥကြွေချိန် (Day 13 or Day 14)မတိုင်မီ ၅ရက်အလိုအတွင်း သုတ်ကောင် သားအိမ်ထဲရှိမနေရင် မျိုးမအောင်နိုင်တော့ ကလေးမရနိုင်ပါဘူး။
ပြီးရင် သားဥကြွေချိန် (Day 13 or Day14)အဲဒီ့ကာလကုန်လို့ ၃ရက်(အများဆုံး ၄ရက်)နေရင် သားဥရဲ့သက်တမ်းက ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် 19ရက်မြောက်နေ့ (day 19 )ကစပြီး ရာသီမလာမချင်းဟာ ချစ်ခြင်းကာလ ( safe period ) ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ!ရာသီပြန်လာတာနဲ့ အစကအတိုင်းပြန်တွက်သွားရုံပါပဲ။ ဒီတော့ရှောင်ရမယ့်ရက် က တစ်လမှာ danger period လို့ခေါ်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ ရာသီလာတာပြီးဆုံးပြီး ၈ရင်မြောက်နေ့ကနေ ၁၈ရက်မြောက်နေ့ထိ (Day 8 to Day18)11ရက်မျှသာရယ်ပါ။ ဒါဟာ သဘာဝရဲ့ သားဆက်ခြားနည်း အစစ်ပါပဲ။ ဘာလို့ မသုံးကြလဲ ဆိုတော့ မှတ်ရမှာပျင်းကြလို့ပါပဲ။ တွက်ရမှတ်ရမှာပျင်းပြီး အလွယ်လိုက်နေကြလို့ ဒီလို ထိရောက်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ နည်းကို မျက်စိမှောက်နေကြတာပါ…!
ရက်မမှန်ရင်သုံးလို့ မရလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အလွယ်ယူဆချက်တွေရှိနေပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သိပ်တိကျတဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ထားတာမို့ ဘာဆေးမှ မသုံးချင်သူ… ဘာနဲ့မှမတည့်သူ ပျိုမေတွေ အတွက် ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများ စိတ်ချရကြောင်းလည်း ထပ်လောင်းပြောချင်ပါရဲ့။ ခုခေတ် မိန်းကလေးတွေ ဗိုက်လာအပ်လို့ နောက်ဆုံးရာသီပေါ်တဲ့ရက်လို့ မေးရင် မျက်စိသူငယ် နဲ့ ပြန်ကြည့်ကြတာ အယောက်တိုင်းလိုလိုပါ။ အဲဒါ ဘယ်မှာ ပြဿနာသွားတတ်သလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း ( maturity by date ) နဲ့ ခန့်မှန်းမီးဖွားရက် ( estimated date of delivery) တွက်တဲ့ အခါ မှာ အလွဲအချော်ဖြစ်… prem ခေါ် လမစေ့လေးတွေမွေး…post date ခေါ် ရက်တွေကျော် နဲ့ တိုင်ပတ်ကြတောတာပါပဲ။ USG ရှိတဲ့နေရာဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့…နေရာတိုင်း USG ရနိုင်တာမှ မဟုတ်ပဲကို… မရှိတဲ့နေရာက ပိုများတာပါ့!
ဒီနည်းကောင်းလား မကောင်းလားဆိုတာကတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီနည်း အသုံးပြုသူ ၃၀%အထိ ရှိပါတယ်။ ကျန်တာက သားအိမ်တွင်းသန္ဓေတားပစ္စည်းထည့်ကြတာများပါတယ်။ သောက်ဆေးထိုးဆေးသုံးသူ အင်မတန်နည်းပါတယ်။ သားအိမ်တွင်းသန္ဓေတားပစ္စည်းထည့်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အယူလွဲတွေ အကြောင်းကို လည်း ဒေါက်တာနှင်း ထပ်ရေးပါဦးမယ်။Asia နိုင်ငံတွေကတော့ တခြား နည်းတွေ ပို အသုံးများတယ်။ ထိုးဆေးသောက်ဆေးသုံးတာများတဲ့အခါ ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ၂၀၁၆ က စစ်တမ်းတွေ အရ Asia ဘက် နိုင်ငံတွေမှာ fertality rate ခေါ် သန္ဓေအောင်မှုနှုန်း သိသိသာသာ ကျလာတာပဲ… မြုံကုန်တာကိုး။ လိုချင်တဲ့ အချိန် ကလေး မရတော့ဘူး။ ဓမ္မတာ မမှန်တော့ဘူး။ လင်စိတ်သားစိတ်ခမ်းလာမယ်။ ကြာလာရင် နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ နှလုံးထိနိုင်တယ်။ သွေးခဲပိတ်တာ လေဖြန်းတာတွေ ကစပြီး တချို့သော cancer အမျိုးအစားတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ် လို့လည်း အချက်အလက်တွေ မှာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ကြာမှပါ။ ဒီဆေးတွေက ရေတိုအတွက်ပဲကောင်းတယ်… လူတိုင်းနဲ့ မသင့်ဘူး ဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ သဘာဝတရား ကို ဆန့်ကျင့်တဲ့ အခါ သဘာဝရဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုဆိုတာက ရှိစမြဲကိုး။
ဒီစာဖတ်မိသူ အိမ်ထောင်ရှင်မမ တို့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ရာသီစက်ဝန်းကိုသာ သေချာမှတ်နိုင်ရင်ဘာဆိုးကျိုးမှ မရှိတဲ့ သဘာဝနည်းလေးသုံးပြီး ကျန်းမာ လှပစွာဖြင့် ချစ်တိုက်ပွဲ ဝင်နိုင်ပါစေကြောင်း…..။
ဒေါကျတာနှငျး အပွငျဆေးခနျးစထိုငျတော့ လာကွတဲ့ လူနာတှရေဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ဟာ depot ချေါ ၃ လခံ သန်ဓတေားဆေး လာထိုးကွတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေယျပါ။ အရှယျစုံ ပါပဲ… အိမျထောငျကတြာ မကွာသေးလို့.. ကလေး မယူခငျြသေးလို့… ကလေးတှကေ မြားနပွေီမို့လို့… စီးပှားရေးအရ ကလေး ယူဖို့ မပွလေညျလို့… စတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ မြိုးစုံနဲ့ပေါ့လေ။ ကွပျသညျထကျကွပျလာတဲ့ခတျေကွီးမှာ မြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေးထကျ သားဆကျခွားကနျြးမာရေးကို ပိုပွီးဦးစားပေးလာကွတာကို တှနေ့ရေသညျလေ။ ဆေးကဒျသောကျတယျ ဆိုတာ သူတို့ အနိမျ့ဆုံးလုပျနိုငျတဲ့ ငှကေုနျကွေးကြ အသကျသာဆုံး သားဆကျခွား နညျးပဲ။ ဒါပမေဲ့ သောကျရမှာမတေ့ာနဲ့ မှတျရတာနဲ့ ဆိုတော့ ၃ လခံဆေးဘကျ လှညျ့လာကွသညျ။
ရာသီပျေါပွီး ၇ ရကျအတှငျးထိုးရငျ ၃ လ ကတော့ အေးဆေးနတေော့ပဲ …. ရာသီမပျေါခငျထိုးရငျတော့ ၇ ရကျ တူတူနတောရှောငျ..မရှောငျနိုငျရငျ အမြိုးသားကို ကှနျဒုံးသုံးခိုငျး ဒါမှ မဟုတျ ကိုယျက အရေးပျေါတားဆေးသောကျပေါ့။ စိတျခရြလားဆိုတော့ ဆေးရဲ့ အရညျအသှေး၊ သိုလှောငျမှုစနစ၊ျ ထိုးတဲ့ ရကျ ၊ ထိုးပုံထိုးနညျး ၊ ကိုယျနဲ့ သငျ့မသငျ့ စတာတှေ အပျေါမူတညျပွီး ဆေးထိုးတဲ့လူတဈထောငျမှာ ၃-၅ယောကျလောကျထိ ဆေးမအောငျဘဲ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျသညျ။ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့တော့ အတျောနညျးတဲ့ အနအေထားပါ။သို့သျော ထိုအနညျးအကဉျြးထဲ ကံဆိုးစှာဖွငျ့ ကိုယျဝနျရသှားတဲ့အခါ..” ဆရာမရယျ လှနျခဲ့တဲ့လကမှ ဆေးထိုးထားတာ ဥစ်စာ … ဘယျလို ကိုယျဝနျရသှားတယျ မသိဘူး” ဆိုပီးမေးကွပါလရေော… ။
” ရျော…. တျောတို့ကို ရှငျးပွထားတယျလကှေယျ…ဘယျဆေး ဘယျနညျးလမျးမှ ၁၀၀% ကိုယျဝနျတားပေးနိုငျတယျ အာမ မခံဘူးဆိုတာ” လို့ပွောတော့မှ မကျြနှာလေး မဲ့တဲ့တဲ့ နှငျ့ ကလေး မလို ခငျြပဲ ယူလိုကျကွရတာမြိုး ရှိသေးသညျ။ သညျကွားထဲ ထိုးဆေး သောကျဆေးတှဆေိုတာက အနညျးနဲ့ အမြားဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှနှေငျ့… ဆေးသောကျဆေးထိုးပွီး မူးလို့မျောလို့..တလှပျလှပျတုနျလို့…သှေးပေါငျတကျလို့..ဝ တကျလာလို့.. စတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာပေါငျးစုံကွောငျ့ ဆေးရပျ လိုကျရတဲ့သူတှလေညျး ရာခိုငျနှုနျးမနညျး။ ကဲ… ဘာလုပျမလဲ?? လကျမောငျးထဲ ပိုကျထညျ့ ဆိုတော့ ပိုကျဖိုးက သူတို့ လခသုံးပုံတဈပုံစာလောကျရှိသညျ… မတတျနိုငျဘူးဆရာမရယျ တဲ့။ သားအိမျထဲ ပစ်စညျးထညျ့ရငျ သိပျမကုနျဘူး … ထညျ့ခငျြလားဆိုတော့လညျး တဈဝကျလောကျက ယောကျြားသာယူထားတာ မကွားကောငျးတာကွားလိုကျရသလိုကွောကျလိုကျသညျမှာနစေရာမရှိ။
မနာပါဘူး လို့ ဘယျလိုပငျစညျးရုံးသျောလညျး လကျမခံ… ကိုယျကလညျး သိပျမစညျးရုံးရဲ… သညျနညျးက သှေးဆငျးမြားတာ မမှနျတာ ဆီးစပျအောငျ့တာတှေ ဖွဈတတျသေးသညျ။ ကဲ… ဒါဖွငျ့ကှနျဒုံးသုံးကွဆိုတော့ မကျြနှာတျောတှကေ မကွညျ။ ကွားလသှေေးတောငျ ဝေးတယျထငျတဲ့ ညားကာစလငျမယားကို ဒီဆရာမက ဘာတှေ လုပျခိုငျးမှနျး မသိဘူး ဆိုတဲ့ မထုံတတျတေးမကျြနှာပေးလေးတှနှေငျ့။ တကယျတော့ ကှနျဒုံးက လှဲလို့ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ သားဆကျခွားနညျးတှေ အကုနျလုံးဟာ သဘာဝကို ဆနျ့ကငျြ တာမွဈတဲ့ နညျးလမျးတှေ ဖွဈတဲ့ အလြောကျ ဆိုငျရာ ဆိုငျရာ ဆိုးကြိူးတှရှေိသညျ။ တားဆေး ကွာကွာ သောကျ/ထိုး လြှငျ ဆေးဖွတျလိုကျသျောလညျး ရာသီ စကျဝနျး ကမောကျကမ ဖွဈတာ.. ရာသီထိနျတာ… ကလေးလိုခငျြကာမှ မရတော့တာ… ဒါတှကေ အတှရေ့အမြားဆုံး နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှပေေါ့လေ။
ကြှနျမဆေးခနျးထိုငျလာတဲ့သကျတမျးတလြှောကျ ကလေးလိုခငျြလို့ လာတိုငျပငျတဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှကေို မေးကွညျ့တဲ့အခါ အဲ့ထဲက၁၀ယောကျမှာ ၉ယောကျက အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ တားဆေးတှထေဲက တနညျးမဟုတျတနညျးကို နှဈနဲ့ခြီ သုံးစှဲထားတဲ့သူတှဖွေဈနတောတှရေ့တယျ။ဒီနိုငျငံမှာလို စဈတမျးကောကျသုတသေနအခကျြအလကျတှအေားနညိးလို့သာ အပျေါက သဘာဝဆနျ့ကငျြတဲ့နညျးတနေဲ့ကိုယျဝနျတားခွငျးတှကေို ရရှေညျသုံးစှဲရငျ တကယျကလေးလိုခငျြတဲ့အခါ ကလေးမရနိုငျတော့တဲ့ ရာခိုငျနှုနျး ဘယျလောကျရှိလညျး အတိအကြ မပွောနိုငျတာ။နှဈရှညျလမြား ရရှေညျသုံးစှဲရငျ ကလေးမရနိုငျခအြေရမျးမွငျ့တယျဆိုတာ ကြှနျမအတှအေ့ကွုံအရ သတိထားမိတာမို့ ဒါကို လေးလေးနကျနကျ သတိခပျြစလေိုပါတယျ။
ဆိုတော့… ဆိုးကြိုးမရှိပဲ ၁၀၀% ထိရောကျတဲ့ နညျးလမျး မရှိတော့ဘူး လား ဆရာမရယျ လို့ မေးရငျ ရှိပါသညျ။ သဘာဝတရားရဲ့ လကျဆောငျကို ဒေါကျတာနှငျးတို့ သတိ မထားမိ ကွလို့သာပါ…တကယျတမျးသခြောလိုကျလုပျရငျ တညျေတျော ထိရောကျပါသညျ။ လိုတာကတော့ ပွက်ခဒိနျ တဈခုနဲ့ ဂဏနျးသခြာင်္အပေါငျးအနှုတျ တတျရငျ ဖွဈပွီဆိုပါတော့။ အလှယျ “ရကျရှောငျနညျး” လို့ပဲချေါလိုကျရအောငျပါ။ ကွညျ့လိုကျရအောငျ…
အမြိုး သမီးတဈဦးရဲ့ရာသီစကျဝနျးမှာ အဆငျ့ ၂ ခုရှိတယျ။ သားဥမကွှမေီအဆငျ့(Follicular phase)နဲသားဥကွှပွေီးအဆငျ့(Luteal phase)့ပေါ့။ အဲဒီမှာ ရှကေ့အဆငျ့ သားဥ မကွှမေီအဆငျ့(Follicular phase)ရဲ့ ကွာခြိနျက ပုံသေ (၁၄) ရကျပဲ။ နောကျက သားဥကွှပွေီးအဆငျ့( luteal phase)ကသာ အခြိနျကာလ ရှညျတာ တိုတာ အပွောငျးအလဲ ရှိနိုငျသညျ။ သညျတော့နောကျက သားဥကွှပွေီးအဆငျ့ရဲ့ ကွာခြိနျပျေါမူတညျပွီး ၂၈ ကွာတို့…၃၀ ကွာ..၃၂ ရကျကွ ဓမ်မတာစကျဝနျး ကာလ တှေ ကှဲသှားတာအားလုံးက ဒီသားဥကွှပွေီးအဆငျ့ရဲ့ ကွာခြိနျ အပွောငျးအလဲကွောငျ့ပါပဲ။ ဒါဟာ သဘာဝကပေးတဲ့ ဇီဝကမ်မ ဖွဈစဉျရဲ့ တိကမြှုပါပဲ။ ဒီဖွဈစဉျပျေါ အမွတျထုတျပွီး ပွက်ခဒိနျနညျး (ဝါ) ရကျရှောငျနညျးရယျလို့ ဖွဈလာတာပါ။
ကဲ အခု… အဓိက ပွောခငျြတဲ့ အပိုငျးကိုရောကျပွီ။ အမြိုးသမီးတဈဦး ဓမ်မတာလာလို့ နောကျဆုံးရကျ ပွီး နောကျတဈရကျ ကို Day 1 (ပထမရကျ ) လို့ သတျမှတျပါမညျ။ အဲဒီ ပထမရကျကနေ အဌမရကျမွောကျနေ့ ( day 1 to day 7)အထိသညျ ခဈြခွငျးကာလ ( safe period) ပါ… ဆိုလိုတာက စိတျခလြကျခြ တူတူနလေို့ရပါသညျ။ ကလေး မရနိုငျပါ။8ရကျမွောကျနကေ့နေ 18ရကျမွောကျနေ့ ( day8 to day18)သညျ ခဈြခွငျး၏အန်တရာယျကာလပါ။ ကလေး ရနိုငျခြေ ရှိတဲ့ ကာလပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ သန်ဓတေညျဖို့ဆိုရငျ မမြိုးဥ(သားဥ) နဲ့ သုတျကောငျ ပေါငျးရပါမညျ။ သညျလိုပေါငျးဖို့ရာ သားဥကွှတေဲ့ အခြိနျနဲ့ သုတျကောငျရောကျလာနိုငျတဲ့ အခြိနျတိုကျဆိုငျဖို့ လိုပါသေးသညျ။ သာဥဘယျခြိနျကွှသေလဲဆိုရငျ ပထမအဆငျ့ရဲ့ အဆုံးခါနီးမှာကွှပေါသညျ။ ဒါဆို ရာသီရကျနှငျ့တှကျလြှငျ Day 13(or Day 14) မွောကျနပေ့တျဝနျးကငျြဖွဈပါသညျ။ သားဥသကျတမျးက 3ရကျ။ ဆိုတော့ သညျရကျ အတှငျး သုတျကောငျရောကျလာရမညျ။ သုတျကောငျ၏ သကျတမျးက အမြားဆုံး ၅ရကျ ဆိုတော့ ဒီသားဥကွှခြေိနျ (Day 13 or Day 14)မတိုငျမီ ၅ရကျအလိုအတှငျး သုတျကောငျ သားအိမျထဲရှိမနရေငျ မြိုးမအောငျနိုငျတော့ ကလေးမရနိုငျပါဘူး။
ပွီးရငျ သားဥကွှခြေိနျ (Day 13 or Day14)အဲဒီ့ကာလကုနျလို့ ၃ရကျ(အမြားဆုံး ၄ရကျ)နရေငျ သားဥရဲ့သကျတမျးက ကုနျဆုံးသှားပွီဖွဈတဲ့အတှကျ 19ရကျမွောကျနေ့ (day 19 )ကစပွီး ရာသီမလာမခငျြးဟာ ခဈြခွငျးကာလ ( safe period ) ပွနျဖွဈသှားပါပွီ!ရာသီပွနျလာတာနဲ့ အစကအတိုငျးပွနျတှကျသှားရုံပါပဲ။ ဒီတော့ရှောငျရမယျ့ရကျ က တဈလမှာ danger period လို့ချေါတဲ့ ဖွဈနိုငျခအြေမြားဆုံးကိုတှကျခကျြထားတဲ့ ရာသီလာတာပွီးဆုံးပွီး ၈ရငျမွောကျနကေ့နေ ၁၈ရကျမွောကျနထေိ့ (Day 8 to Day18)11ရကျမြှသာရယျပါ။ ဒါဟာ သဘာဝရဲ့ သားဆကျခွားနညျး အစဈပါပဲ။ ဘာလို့ မသုံးကွလဲ ဆိုတော့ မှတျရမှာပငျြးကွလို့ပါပဲ။ တှကျရမှတျရမှာပငျြးပွီး အလှယျလိုကျနကွေလို့ ဒီလို ထိရောကျပွီး အသုံးဝငျတဲ့ နညျးကို မကျြစိမှောကျနကွေတာပါ…!
ရကျမမှနျရငျသုံးလို့ မရလောကျတော့ဘူးဆိုတဲ့ အလှယျယူဆခကျြတှရှေိနပေမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ သိပျတိကတြဲ့ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျအပျေါအခွခေံပွီးတှကျထားတာမို့ ဘာဆေးမှ မသုံးခငျြသူ… ဘာနဲ့မှမတညျ့သူ ပြိုမတှေေ အတှကျ ရာခိုငျနှုနျးအတျောမြားမြား စိတျခရြကွောငျးလညျး ထပျလောငျးပွောခငျြပါရဲ့။ ခုခတျေ မိနျးကလေးတှေ ဗိုကျလာအပျလို့ နောကျဆုံးရာသီပျေါတဲ့ရကျလို့ မေးရငျ မကျြစိသူငယျ နဲ့ ပွနျကွညျ့ကွတာ အယောကျတိုငျးလိုလိုပါ။ အဲဒါ ဘယျမှာ ပွဿနာသှားတတျသလဲ ဆိုတော့ ကိုယျဝနျသကျတမျး ( maturity by date ) နဲ့ ခနျ့မှနျးမီးဖှားရကျ ( estimated date of delivery) တှကျတဲ့ အခါ မှာ အလှဲအခြျောဖွဈ… prem ချေါ လမစလေ့ေးတှမှေေး…post date ချေါ ရကျတှကြေျော နဲ့ တိုငျပတျကွတောတာပါပဲ။ USG ရှိတဲ့နရောဆိုရငျ အဆငျပွနေိုငျပမေဲ့…နရောတိုငျး USG ရနိုငျတာမှ မဟုတျပဲကို… မရှိတဲ့နရောက ပိုမြားတာပါ့!
ဒီနညျးကောငျးလား မကောငျးလားဆိုတာကတော့ အနောကျနိုငျငံတှမှော ဒီနညျး အသုံးပွုသူ ၃၀%အထိ ရှိပါတယျ။ ကနျြတာက သားအိမျတှငျးသန်ဓတေားပစ်စညျးထညျ့ကွတာမြားပါတယျ။ သောကျဆေးထိုးဆေးသုံးသူ အငျမတနျနညျးပါတယျ။ သားအိမျတှငျးသန်ဓတေားပစ်စညျးထညျ့တာနဲ့ ပတျသတျပွီး အယူလှဲတှေ အကွောငျးကို လညျး ဒေါကျတာနှငျး ထပျရေးပါဦးမယျ။Asia နိုငျငံတှကေတော့ တခွား နညျးတှေ ပို အသုံးမြားတယျ။ ထိုးဆေးသောကျဆေးသုံးတာမြားတဲ့အခါ ဘာဖွဈလာသလဲဆိုတော့ ၂၀၁၆ က စဈတမျးတှေ အရ Asia ဘကျ နိုငျငံတှမှော fertality rate ချေါ သန်ဓအေောငျမှုနှုနျး သိသိသာသာ ကလြာတာပဲ… မွုံကုနျတာကိုး။ လိုခငျြတဲ့ အခြိနျ ကလေး မရတော့ဘူး။ ဓမ်မတာ မမှနျတော့ဘူး။ လငျစိတျသားစိတျခမျးလာမယျ။ ကွာလာရငျ နောကျဆကျတှဲ အနနေဲ့ နှလုံးထိနိုငျတယျ။ သှေးခဲပိတျတာ လဖွေနျးတာတှေ ကစပွီး တခြို့သော cancer အမြိုးအစားတှကေို ဖွဈစနေိုငျတယျ လို့လညျး အခကျြအလကျတှေ မှာတှရေ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သိပျကွာမှပါ။ ဒီဆေးတှကေ ရတေိုအတှကျပဲကောငျးတယျ… လူတိုငျးနဲ့ မသငျ့ဘူး ဆိုတာ သတိခပျြစခေငျြပါတယျ။ သဘာဝတရား ကို ဆနျ့ကငျြ့တဲ့ အခါ သဘာဝရဲ့ ဒဏျခတျမှုဆိုတာက ရှိစမွဲကိုး။
ဒီစာဖတျမိသူ အိမျထောငျရှငျမမ တို့လညျး ကိုယျ့ရဲ့ ရာသီစကျဝနျးကိုသာ သခြောမှတျနိုငျရငျ
ဘာဆိုးကြိုးမှ မရှိတဲ့ သဘာဝနညျးလေးသုံးပွီး ကနျြးမာ လှပစှာဖွငျ့ ခဈြတိုကျပှဲ ဝငျနိုငျပါစကွေောငျး…..။
အမြိုးသမီးမြားအတှကျ သားသမီးလှယျကူစှာ ရနိုငျရနျ…
OnDoctor © 2018 - All Rights Reserved.